Xiaomi Mi MIX 2S Will Be Announced On March 27 by CEO Lei Jun
Home » News » Mi Mix2Model အသစ်အတွက် လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း CEO Lei Jun အတည်ပြု
Mi Mix2Model အသစ်အတွက် လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း CEO Lei Jun အတည်ပြု
In News On March 7, 2017
Xiaomi ရဲ့ Mi Mix Model ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့အပြီးမှာ Xiaomi အနေနဲ့ 2nd Generation Mi Mix2ကို ယခင် Model ထပ်ပိုမိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း Xiaomi CEO ဖြစ်သူ Lei Jun ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Xiaomi Mi Mix concept phone Design ကိုဖန်တီးရေးဆွဲပေးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး Designer “Philippe Starck” ကိုယ်တိုင်ပဲ Mi Mix2အတွက် Design ပိုင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mi Mix နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ အသုံးပြုသူတွေဆီကနေ Feedback မျိုးစုံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေကပဲ ယခု Mi Mix2ထပ်မံထုတ်လုပ်ပြီး စျေးကွက်တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက် တွန်းအားတခုဖြစ်လာစေခဲ့တာပါပဲ။
အစောပိုင်းမှာ Mi Mix2နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ကောလဟလသတင်းတွေအရ screen-to-body ratio 100% ရှိလိမ့်မယ်လို့ အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပေမယ့် တိကျတဲ့ တရုတ်သတင်းဆိုဒ်တခုကတော့ ၎င်း Mi Mix2Model နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး screen-to-body ratio ဟာ 93% ရှိတယ်လို့ အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
(မှတ်ချက် – အထက်ပါဓာတ်ပုံသည် Mi Mix2ဖြစ်ကြောင်း သတင်းပေါက်ကြားခဲ့သော ပုံဖြစ်ပါသည်)
ဒါ့အပြင် အဆိုပါ Mi Mix2ကို AMOLED Display နှင့်အတူ Mi Mix ကဲ့သို့ Ceramic body တပ်ဆင်အသုံးပြုမည်ဟုလည်းသိရှိရပါသည်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ ၎င်း Mi Mix2မှာ Mi 5s ကဲ့သို့ Ultrasonic fingerprint sensor ကိုရှေ့ဖက်မျက်နှာပြင်မှာတပ်ဆင်အသုံးပြုပေးထားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒါပေမယ်လို့ ၎င်း Mi Mix2နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ Specifications တွေနဲ့ စျေးကွက်အတွင်းမိတ်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်တွေကိုတော့ ကုမ္ပဏီဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အဆိုအရ ၎င်း Mi Mix2ကို Apple ရဲ့ Next Generation ဖုန်းဖြစ်တဲ့ iPhone 8 နဲ့အတူ ပွဲထုတ်ဖွယ်ရှိကြောင်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
Topics: Lei Jun Mi Mix2Xiaomi Xiaomi CEO
Previous Post [How to] Google Chromecast ဆိုတာဘာလဲ? Chromecast က ဘာတွေအသုံးဝင်လဲ?
Next Post Xiaomi ရဲ့ AI Product အသစ်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း CEO Lei Jun ပြောဆို